Lalàm-pifidianana : manao amboletra amin’izay tiany hatrany ny mpitondra | NewsMada
Lalàm-pifidianana : manao amboletra amin’izay tiany hatrany ny mpitondra
“Mbola misy indray manao hoe: omeo anay isaky ny fehezanteny… Ahoana re izany? Maninona raha miteny koa hoe: omeo anay ny toeran’ny Praiminsitra sy ny toeran’ny governemanta, fa izahay no hanao ny lalàna. Taiza no nisy an’izany?”
Io ny nambaran’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana O., teny Mahazoarivo, omaly, momba ny fitakian’ny firaisamonina sivily sy ny antoko politika ny volavolana lalàm-pifidianana alohan’ny hanolorana azy amin’ny filankevitry ny governemanta sy ny filankevitry ny minisitra. Vita ny tapany voalohany tamin’ny asan’ny komity iraisan’ny minisitera, nisy ny fiantsoana ny firaisamonina sivily sy ny antoko politika. “Nanao izany ange ny governemanta”, hoy izy.
Efa nisy fifanajana izany, fa avelao handrafitra azy ny governemanta. Tsy maintsy jerena hatrany ny tombontsoa ambonin’ny firenena. Tsy manaiky foana izany ny parlemanta, araka ny fanazavany. Raha misy tsy mahafa-po ny lalàm-pifidianana, mbola afa-manatona ny Antenimiera roa tonta izay mahita ny tsy mety amin’ny lalàm-pifidianana.
Tsy afa-manery ny parlemantera eoropeanina
“Maneho ny heviny ny parlemantera eoropeanina, fa tsy afa-manery an’i Madagasikara. Izay manana fiandrianam-pirenena”, hoy izy momba ny fanambaran’ny parlemantera eoropeanina momba an’i Madagasikara . Isika Malagasy ihany no mahafantatra ny mahasoa antsika. Raha misy zava-manahirana, vonona hifampidinika ny filoham-pirenena.
Izay ilay adihevitra mampiady
Inona loatra no mampiaka-peo sy mampihenjana ny mpitondra amin’izao? Raha noraisina araka ny tokony ho izy tokoa, ohatra, ny fakan-kevitra tamin’ny firaisamonina sivily sy antoko politika, nahoana no tsy haseho hiaraha-mahita? Ny ahiahin’ny maro, ho toy ny lalàna mifehy ny serasera… mamono fahafahana: fombafomba fotsiny ny fakan-kevitra, fa izay tian’ny mpitondra ihany no atao… amboletra amin’izay saim-pantatra.
Amin’izany, resaka ihany ny hoe afa-manolotra soso-kevitra eny anivon’ny Antenimiera roa tonta izay mahita tsy fetezana amin’ny lalàm-pifidianana: tsy mihinana am-bolony izay atolotra azy tokoa ve hatramin’izay?
Ahina mafy ny krizy mialoha na mandritra na aorian’ny fifidianana, raha miseholany sahady ny fifampiahiahiana sy fifanenjanana. Nefa vao fandrafetana lalàm-pifidianana… Vao mainka izany fa fifidianana, ka misy resy eo…